သတင်းခေါင်းစဉ်အရဆိုရင် မဟာဗမာ အစိုးရက တိုင်းရင်းသားတွေကို ပေါ်တင်ပဲအချက်ပြလိုက်ပါပြီ "မင်းတို့ ကို သနားတယ်" ဟားဟား..
Posted by ဇင်ယော် at 3:42 AM
This article title had no sense. They only showed the red light for Burmese Government already had two different power such as government part and military part (it meant 2008 Constitution still alive).
The government tried to negotiate every ethnic groups, but they stated their words and policy were the same as the previous time. Why did they still using the words as the previous time to all ethnic groups? Please try to think about this!
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းဟာ အင်မတန်ညစ်ပတ်နဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ကျင့်သုံးနေပါတယ်။ သမတဦးသိန်းစိန်နဲ့ သူ့ဝန်ကြီးများကတဖွဲ့၊ မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ သူ၏စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကတဖွဲ့(နောက်ကွယ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့အဖွဲ့)၊ စစ်သား ၂၅ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ စစ်သားလူထွက် ဗိုလ်ဟောင်းတွေပါတဲ့ ကြံ့ဖွံ့ဦးစီးတဲ့ လွှတ်တော်ကတဖွဲ့၊ အဲဒီလိုဒီလိုလုပ်ထားတယ်။
အဲဒီ ၃ခုပေါင်းလိုက်ရင် အတူတူဘဲ။ ဦးအောင်မင်းဦးစီးတဲ့ အဖွဲ့ကတော့ အဓိကပန်းတိုင်ကတော့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ အပြီးတိုင် လက်နက်ချရေးမူပါဘဲ၊ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်တော့ သူတို့ပေးသလောက်တော့ရမယ်။